Yakanakisa CPLA Kucheka Kugadzira uye Fekitori Huanna
Zita reProduct: Biodegradale Disposable Cutlery Zvinhu: CPLA
Rudzi rweFlatware: Flatware Sets Certification: Sgs, EN13432
Feature: Disposable Eco Shamwari Yakachengetwa Biodegradable Nzvimbo Yekutanga: Shanghai, China
Zita Rekushandisa: NATUREPOLY Rudzi rwekambani: Kugadzira
Nguva yekuendesa: Mazuva 20 CPLA cutlery Usage: Maresitorendi, Kudya Kwakakurumidza uye Takeaway Chikafu Services
Saizi: 6 '', 6.5 '', 7 ", 7.5 '' Ruvara: Ichena, Nhema uye yakasarudzika ruvara
Shandira kutora kunze uye kuendesa maodha needu CPLA Plastic Kucheka. Aya machena cutlery seti anosanganisira zvipunu, maforogo nemapanga ekupa vashanyi nezvose zvakakosha zvinodiwa kuti tidye chikafu.
Innovation, yakanakisa uye kuvimbika ndiyo yakakosha tsika yekambani yedu. Aya mazano nhasi uno zvakanyanya kupfuura nakare kose anoita hwaro hwebudiriro yedu sebhizimusi repasi rese rinoshanda repakati-saizi bhizinesi reTrending Zvigadzirwa China 100% Inogadzikana Inogadzirwa nehuipi Inogadziriswa Tafura yeCpla Kudya Kwemanheru Set 7 "Cutlery, Hatina kufadzwa tichishandisa izvo zvirikuitika asi isu 'tiri kuyedza zvakanakisa kugadzira zvitsva kugutsa vatengi' uye vatengi 'zvido zvakajairwa. Hazvinei kuti urikubva kupi, isu tiri pano kuzomirira yako mhando chikumbiro, uye welcom yekushanyira yedu yekugadzira unit. Sarudza isu, unogona kugutsa yako akavimbika mupiki.
Trending Zvigadzirwa China Biodegradable Cutlery uye Compostable Cutlery mutengo, Kambani yedu iri kushanda nekuvhiya musimboti we "kutendeka-kwakavakirwa, kubatana kwakagadzirwa, vanhu vakatungamira, kuhwina-kuhwina kubatana". Isu tinovimba tinokwanisa kuve nehukama nehukama nemabhizimusi kubva pasirese.
Pashure: Bhegi reBubble
Zvadaro: Dhiriini mudziyo
Cpla Forogo, Banga Nechipunu Set